sci fi ဖြင့် ဇာတ်ကား200 ကား
Call me Savior (2017) ဇာတ်ကားကတော့Director: LeeDul ရိုက်ကူးထားတဲ့Chinese ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Mydramalist 6.3ရထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးမင်းသား LiuShen နှင့် မင်းသမီး Wushao Jun တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကာတွန်းရေးဆရာတစ်ယောက်ကတစ်နေ့မှာ သူငယ်ငယ်က ချစ်ဖူးခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့တူသောဂြိုလ်သားမလေးကို မထင်မှတ်ဘဲတွေ့လိုက်ရပြီးနောက် အချိန်တွေနောက်ပြန်ရောက်ကာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားမလဲ…. Past and Future ကို ယှဉ်တွဲရိုက်ပြထားတဲ့Chinese Historical,Romance,Sci-Fiဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ငါးမန်းတစ်ကောင်ကို လူအသိဉာဏ်လိုမျိုးအရာတွေ ထည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေရလာမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်လား… ငါးမန်းဆိုတာမျိုးကရေဘုရင်လို့တင်စားလို့ရတဲ့ အသားစားသတ္တဝါတွေပါ…ဒီလိုအကောင်မျိုးတွေကို လူတွေရဲ့သုတေသနအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ တော်တော်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့စွန့်စားမှု့တစ်ခုပါပဲ… ဒါပေမယ့် စူးစမ်းချင်တာကလည်းလူတွေရဲ့သဘာဝ မဟုတ်ပေဘူးလား…ဒါကြောင့် ငါးမန်းတွေကိုမွေးမြူပြီး အဖွဲ့လိုက်အမဲလိုက်တတ်အောင်သင်ပေးကြပါတယ်… ငါးမန်းဆိုတာမျိုးကတစ်ကောင်တည်း အစာရှာတတ်တဲ့အမျိုးတွေပါ… ဒီလို အရိုင်းစိုင်းကောင်တွေကို အဖွဲ့လိုက်အမဲလိုက်တတ်အောင် သင်ပေးတာကလည်းတော်တော်ကိုမလွယ်သလို အရမ်းလည်းအန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်ပါ…. ဒီလိုတိုးတက်လာတဲ့ ငါးမန်းတွေကို လူသားတစ်ယောက်လိုတွေးခေါ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ လူတွေက အမဲလိုက်လို့သင်ပေးလိုက်တဲ့ သူတို့ရဲ့ငါးမန်းတွေက သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ အမဲလိုက်ကြပါတော့တယ်… အဲလိုအမဲလိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ ပင်လယ်ပြင်ရေအောက်စခန်းမှာ ပိတ်မိနေကြမယ့် လူသားတစ်စုရဲ့ အသက်ရှင်လှုပ်ရှားမှု့တွေကို စိတ်လှုပ်ရှားကြောက်လန့်ဖွယ်မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်… ဒီကားက Rating နည်းပေမယ့် ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် ကားမျိုးပါ…
Destiny The Tale of Kamakura (2107)
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Rating 7အထိကိုရရှိထားတဲ့ ရှားရှားပါးပါး ဂျပန်ကားလေးဖြစ်ပြီး Crime, dramaကားအမျိုးအစားလေး ဖြစ်ပါတယ် ဒီကားလေးမှာဆိုရင်တော့အီရှီကီဆိုတဲ့သူနဲ့အာဆာကိုတို့လက်ထပ်ပြီးနောက်အီရှီကီရဲ့မွေးရပ်မြေကိုရောက်လာတယ် ထူးခြားတာကအဲ့မှာလူတွေတင်မကဘူး ဝိညာဉ်တွေပါနေထိုင်တယ် သူတို့လည်းဝိညာဉ်တွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရတာပေါ့ သေခြင်းရှင်ခြင်းကြားမှာထပ်ပြီးနေလို့ရသေးတာတွေတွေ့ရတယ် တမလွန်အကြောင်းတွေကိုလည်းရှင်းပြထားတယ် ကိုယ်ထဲကလိပ်ပြာထွက်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းပြထားတယ် ဝိညာဉ်နဲ့ ပတ်သက်တာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြည့်သင့်တဲ့ကားတစ်ကားပေါ့ သူတို့ရဲ့ ဝိညာဉ်တွေနဲ့အတူဘယ်လိုနေကြလဲ အီရှီကီကရဲစခန်းမှာအကြံပေးလည်းလုပ်တော့စုံထောက်ဆန်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလည်းပါတယ် တစ်နေ့ အာဆာကိုရဲ့ဝိညာဉ်က ကိုယ်ထဲကထွက်သွားပါလေရော အဲ့တော့ သေမင်းကလာခေါ်ရော အီရှီကီက အဲ့ဒါကိုတားဆီးနိုင်မလား မတားနိုင်ဘဲ တမလွန်ကိုပါသွားရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ဘာတွေရောဆက်ဖြစ်ကြဦးမှာလဲ ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကို Destiny.The Tale of Kamakura 2017ဆိုတဲ့ ဂျပန်ကားလေးမှာ စောင့်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးရှင်
ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ HBO ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Fahrenheit 451 ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်ကာလမှာ အာဏာပိုင်တွေဟာ လူတွေ ပညာဆည်းပူးနေတာတွေ၊ အသိပညာရှာဖွေတာတွေကို ပိတ်ပင်တားဆီးနိုင်ဖို့၊ သတင်းအမှောင်ချနိုင်ဖို့၊ စိတ်ကြိုက်ခြယ်လှယ်နိုင်ဖို့အတွက် စာအုပ်တွေအားလုံးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ စေခိုင်းပါတော့တယ်။ စာအုပ်တွေကို မီးရှို့ဖျက်စီးတဲ့သူတွေထဲမှာ Guy Montag ဆိုတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်လဲ ပါဝင်ပြီး အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အမိန့်အတိုင်း ဘာအမေးအမြန်းမှမရှိပဲ ဖျက်စီးပေးနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို မေးခွန်းထုတ်လာတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက် စာအုပ်တွေကို ဖျက်စီးတဲ့လုပ်ရပ်ကို သူကိုယ်တိုင်ပြန်လည်တားဆီးဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေကတော့ Black Panther ဇာတ်ကားထဲမှ Michael B. Jordan နဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့ Michael Shannon တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Fahrenheit 451 ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး မင်းသားကောင်း ၂ လက်နဲ့အတူ ဇာတ်လမ်း အစအဆုံးဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားလို့ပဲ ညွန်းလိုက်ပါရစေ။
၂၀၁၈ထဲမှာထွက်တဲ့ကားတွေမှာ အနာဂတ်မှာဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာတွေးတောရိုက်ထားတဲ့ကားတွေအတော်များသားဗျအခု Future World ဆိုတဲ့ကားကလဲ နာမည်အတိုင်း အနာဂတ်ကမ္ဘာမှာ အခြေတည်ထားပါတယ်လူသားတွေအချင်းချင်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ် သေကြေပျက်စီးကုန်ကြတယ်ဘယ်လောက်ထိအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုရင် ပစ်စရာကျည်ဆံတောင်မရှိတဲ့ခေတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ စစ်ပွဲကြီးအပြီးကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကရော ဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်ကြလဲ
လောကကြီးရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူနဲ့ဆိုးတာလုပ်တဲ့လူပဲရှိတာဆိုတော့ သူ့ဘာသူအဖွဲ့လေးတွေနဲ့ဖွဲ့နေကြတယ်ပေါ့ဗျာဆိုးတဲ့လူတွေက အဖွဲ့လေးတွေနဲက သူ့တို့သူတို့ စစ်ခေါင်းဆောင်(warlord)လို့ခံယူပြီးသောင်းကျန်းနေကြတယ်ပေါ့ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဇာတ်လိုက်ကတော့ အိုအေစစ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာနေကြတဲ့လူစုထဲက မင်းသားပေါ့သူ့အမေဖြစ်သူ စစ်ပွဲရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါကိုခံစားနေရသူ သေလုမျောပါးဝေဒနာသည်အဖြစ် တရုတ်မင်းသမီး (Lucy Lui)က
သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်မင်းသားက အမေ့ကိုဆေးကုသဖို့အတွက် နတ်ပြည်ကမ်းခြေ(Paradise Beach)ကိုသွားချင်နေတယ် အဲ့နေရာမှာဆေးရတယ်ကြားထားတာကိုးအဲ့လိုနဲ့ မင်းသားရဲ့ဆေးရှာပုံတော်ခရီးစဉ်စရတော့တာပေါ့ဇာတ်လိုက်မင်းသမီးကတော့ အက်ရှ်လို့ခေါ်တဲ့ စက်ရုပ်မလေး သူကဟိုးစစ်ပွဲကြီးကတည်းက ရှိနေခဲ့တာ သူကသတ်ဖြတ်ရတာတွေကိုမုန်းတီးနေတယ် သူကိုယ်တိုင်ဘဝတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ချင်နေတယ်မင်းသားတစ်ယောက် ဆေးကိုရှာတွေ့သွားမလားသူရှာနေ
တဲ့ဆေးကရောတကယ်ပဲရှိနေလို့လား စက်ရုပ်မလေးနဲ့ရောဘယ်လိုနှစ်ပါးသွားမလဲဆိုတာတွေကတော့ဇာတ်ကားဒေါင်းကြည့်ကြပါကုန်ဒီကားရဲ့ Cast List ကတော့ အလန်းဗျဗီလိန်အဖြစ် နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ James Franco, Resident Evil မင်းသမီး Milla Jovovich တို့ပါဝင်ထားတယ်ပြီးတော့ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ Snoop Dogg တောင်ပါလိုက်သေးတယ်ဗျဒီဇာတ်ကားထဲမှာ အဖော်အချွတ်အခန်းအချို့နဲ့ စကားလုံးရိုင်းရိုင်းတချို့ပါဝင်နေတာကြောင့် ချင့်ချိန်ပြီးဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ
G.I. Joe The Rise of Cobra(2009)
G.I. Joe: The Rise of Cobra(2009)[1080p 5.1 CH] (((အမိုက်စားသိပ္ပံအက်ရှင်ကားကြီးကို ဝုန်းဂျိန်းအုံးဂွမ်း အသံမျိုးစုံဖြင့်ခံစားနိုင်စေရန်CM ပရိတ်သတ်များအတွက်1080P 5.1CH ဖြင့်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးထားသည်))) ကာဇတ်စတန်နိုင်ငံမှာ မားစ် ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ လက်နက်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုရှိတယ်…..ဒီ ကုမ္ပဏီဟာ NATO ရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ လက်နက်သစ်တစ်မျိုး စမ်းသပ်အောင်မြင်သွားတယ် ။
အဲဒိလက်နက်ကတော့ သတ္ထုတွေကို စားပစ်တဲ့ နာနိုမိုက်လို့ ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်ပဲပေါ့ ။နာနိုမိုက် ဒုံးကျည်ကို ပစ်လိုက်တဲ့အခါ ပစ်မှတ်ကို ထိမှန်ရင် နာနိုမိုက်တွေဟာ အကန့်အသတ်မရှိ သတ္တုတွေစားပစ်တယ်…မလိုလားတဲ့ ဖျက်ဆီးမှုတွေ
မဖြစ်စေချင်ရင်တော့ ပိတ်တဲ့ခလုတ်ကို နှိပ်မှ ရပ်တန့်သွားတတ်တယ်…ဒီလောက်အန္တရယ်ကြီးတဲ့လက်နက်ကို မသမာသူတွေက အဖျက်လုပ်ရပ်တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ လုယူသွားကြတယ်..ကိုင်း ….မသမာသူနဲ့ အတော်ဆုံးစစ်သားတွေကြား အကြမ်းစားရန်ပွဲတွေအကြီးစား လက်နက်မျိုးစုံတွေ အလန်းစား သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ အကောင်းစား ဇတ်ကားကြီးကိုခံစားလိုက်ကြပါကုန်….
ဒီရုပ်ရှင်ကားကို စကြည့်မိတဲ့ အချိန်ဘာကို သတိရမိလဲ ဆိုတော့အရင်က သဘာဝဘေး အကြောင်း
ရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ပြီးရင် အပြင်မှာလဲဆူနာမီ လို မုန်တိုင်းတွေ တိုက်ခတ်ပြီးတကယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ လန့်လွန်းလို့ရှေ့ပြေးနိမိတ် ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါစေနဲ့ အရင်ဆုတောင်းရတယ်ကဲ ဇတ်လမ်းအကြောင်း နည်းနည်းပြောပြမယ်….ဒီရုပ်ရှင်ကားကို Director: Dean Devlin က ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးOctober 11, 2017 မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တယ်…Budget ကို 120 million USD နဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ပေမယ့် Box office မှာ184.4 million USD အထိ ရရှိခဲ့တယ်IMDb 5.6 သာ ရရှိထားပေမယ့် ကျနော့်စိတ်နဲ့ ဆို 7.0 လောက်ထိပေးချင်ပါတယ်
ဒါဆို ဒီရုပ်ရှင်ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အညွှန်းမလာသေးခင်ကြည့်ရတာ တန်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက် တစ်ခုပဲ ရှိသေးတယ်နော်
ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာအဝှမ်း ရာသီဥတုဆိုးရွားပျက်ဆီးမှုတွေ နဲ့ ကြုံတွေ့လာခဲ့ရတာကို စတင်ပြသထားပြီးအဲ့ဒီ ရာသီဥတု ဆိုးဝါးတာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်ဂျိတ် နဲ့ မတ် ဆိုတဲ့ ညီအကို ၂ ယောက်က နိုင်ငံတကာကသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဒက်ချ်ဘွိုင်း ဆိုတဲ့ စနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပြီး အာကသ ထဲတွင် စခန်းတည်ဆောက်ကာသက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေ ရဲ့ ရာသီဥတုတွေကို လိုက်လျောညီထွေစေရန်ဆောင်ရွက်အောင်မြင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်….ဒီလိုနဲ့
တစ်ရက်မှာတော့ ဂျိတ် ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဒက်ချ်ဘွိုင်း စနစ်ကိုနာဆာ လက်အောက်ကို ရယူဖို့အတွက် ဂျိတ် ကို အလုပ်ဖြုတ်ပြီးစနစ် နဲ့ ဝေးရာကို တွန်းပို့ခဲ့ကြပါတော့တယ်ဂျိတ်မရှိတဲ့နောက်မှာဂျိတ် ရဲ့ ညီ ဖြစ်သူ မတ် က စနစ်ကို နာဆာ လက်အောက်မှ တဆင့်ဦးဆောင်ရင်း ၃ နှစ်ခန့် ကြာသော အခါမှာတော့….နာဆာ ရဲ့ ဒက်ချ်ဘွိုင်း ဂြိုလ်တု တစ်ခုဟာ အာဖဂန်နစ်စတန် ရဲ့သဲကန္တာရ တစ်ခုထဲက မြို့အပေါ်ကျခဲ့ပြီး တစ်မြို့လုံး ရေခဲပြီးအကုန်အေးခဲသေသွားကြတယ်…အဲ့ဒီလို ဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင် မှာလဲ အပူရှိန်လွန်ကဲကာဂစ်လိုင်းတွေ ပေါက်ကွဲတဲ့ သတင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီသတင်းကြောင့် ဒက်ချ်ဘွိုင်း ကို ဦးဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ဟာအလုပ်တွေရှုပ်ပြီး ဘာကြောင့်မှန်း အဖြေရှာမရ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ မတ် ဟာ ဒီ
စနစ်ကို စတင်ဦးဆောင်တည်ဆောက်ခဲ့သူသူ့အကို ဂျိတ် ကို နာဆာ ကို ပြန်လာပြီး ဒီ ပြသနာတွေကို အဖြေရှာဖို့ပြန်လိုက်ရှာခေါ်ရပါတော့တယ်ပထမတော့ ဂျိတ် ဟာ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ဝေးဝေးနေချင်ပေမယ့် သူ့ဘ၀ တစ်ခုလုံးနီးပါး ရင်းပြီး အချိန်ပေးခဲ့တဲ့
ဒက်ချ်ဘွိုင်း ရဲ့ ပြသနာကို အဖြေရှာဖို့ ပြန်လက်ခံခဲ့ပါတယ်…ဂျိတ် တစ်ယောက် နာဆာ မှ တဆင့် အာကသ ထဲက ဒက်ချ်ဘွိုင်းစနစ်တည်ရှိရာ စခန်းသို့ ရောက်သွားချိန်မှာတော့ သူ့ညီ မတ်ထင်နေခဲ့သလို ဒက်ချ်ဘွိုင်း ရဲ့ စနစ်ချို့ယွင်းမှု မဟုတ်ပဲအမည်မသိ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ မိုးလေဝသ ထိန်းချုပ်တဲ့ စက်အပေါ်လူသတ်လက်နက် အဖြစ် အသုံးချနေတဲ့ အဖြစ်မှန်း သိရှိသွားခဲ့သောအခါ…..
ရုပ်ရှင်ကား ကြာမြင့်ချိန် ၁ နာရီ ၄၀ မိနစ် ခန့် ရှိပြီးAction, Sci-Fi, Thriller အမျိုးအစား ဖြစ်လို့ ဇတ်လမ်းစတင်ချိန်မှဇတ်လမ်းအဆုံးသတ်ချိန်ထိ ရင်တမမ သည်းထိတ်ရင်ဖို ကြည့်ရှုရမယ့်ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးထားသူတွေကတော့CM Translator တွေ ဖြစ်တဲ့ စောဝဏ္ဏ နှင့် အိစံ တို့ပဲ
0ရာစုရဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာ ဒီဇာတ်လမ်းစခဲ့တယ် အရာရာဟာ ဘုရားသခင် အလိုတော်အတိုင်းပါပဲ.. ကောင်းကင်မှာ မီးမိုးတွေ… ကမ္ဘာမြေကြီးဟာလည်း ပပ်ကြားတွေအက်လို့… လူတွေအားလုံးရဲ့ ဆောက်တည်ရာမဲ့ ကူကယ်ရာမရှိ ပြေးလွှားသံတွေ… ဒီအချိန်မှာ အပြာရောင်အလင်းတန်းကြီး တစ်ချက်ပေါ်လာ… အဲဒီအလင်းတန်းရဲ့ အစမှာ ဂေါ်ဇီလာဟာ အရာအားလုံးကို မိုးကြည့်လို့… Gozilla: Planet of Monsters (2017) လူသားတွေရဲ့ ကမ္ဘာကို သူယူဆောင်သွားခဲ့တယ် လာပြီး ကူညီတဲ့သူတွေကိုလည်း သူဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်… အခုတော့ လူသားတွေဟာ ကမ္ဘာဂြိုလ်ကို စွန့်ခွာပြီး တော့အီဆိုတဲ့ ဂြိုလ်ဆီထွက်လာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၂၂နှစ်ကြာခဲ့ပြီ… ၂၂နှစ်တာ ကာလအတွင်း အေးခဲမှောင်မိုက်တဲ့ အာကာသထဲမှာ တဝဲလည်လည်ဖြစ်လို့… ဒါပေမယ့် ပြန်ပြီး အရောင်သန်းလာတဲ့ မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်လေးတစ်မျှင်ကြောင့် ကမ္ဘာဂြိုလ်ကို ပြန်လာခဲ့တယ်… ဒါပေမယ့်… အာကာသနဲ့ ကမ္ဘာရဲ့အချိန်ကွာဟချက်ကြောင့် လူတွေအနေနဲ့ ကမ္ဘာကိုစွန့်ခွာလာတာ ၂၂ပဲရှိသေးပေမယ့် ပြန်လာချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ နှစ်ပေါင်းနှစ်သောင်းကျော် ကြာနေခဲ့ပြီ… သူ ရှိနေတုန်းပဲ သူ ရှင်သန်နေတုန်းပဲ သူ အုပ်စိုးနေတုန်းပါပဲ ဒါဟာ လူသားတွေရဲ့ နောက်ဆုံးအန္တိမပန်းတိုင် မတိုက်မဖြစ်တိုက်ရတော့မယ့် တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီ… အမိကမ္ဘာမြေကို ပြန်ယူဆောင်ရတော့မယ်လေ… နောက်ဆုံးတော့ ဘုရင်က ဘုရင်ပါပဲ… IMDB – 6.1/10. IGN – 7/10. ဒီ Animation ဟာ Polygon Pictures က ဖန်တီးပေးပြီး Studio Toho လို Your Name, Gozilla: Resurgence တို့နဲ့အတူ Anime နဲ့ CGI အပိုင်းမှာ နာမည်ကောင်းရှိထားတဲ့ Studio တစ်ခုက ထုတ်ပေးထားတာကြောင့် ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ် CGIတွေကို အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာ ကြည့်ရှုရမှာပါ နောက်ပြီး ဒီကားဟာ New Gozilla Trilogy ရဲ့ ပထမဆုံးကားလည်း ဖြစ်ပါတယ် Studio Toho ရဲ့ သုံးဆယ်ခုမြောက် Gozilla ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီး Gozilla Series ရဲ့ သုံးဆယ့်နှစ်ခုမြောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်သိမ်းမှာတော့ ထင်မထားလောက်တဲ့ Plot Twist အကြီးစားကြီးတစ်ခုကို ခံစားလိုက်ရပြီး အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်သွားမှာပါလို့ ညွှန်းရင်းနဲ့… “အရာရာဟာ ဘုရားသခင် အလိုအတိုင်းပါပဲ…”
Director: Zack Snyder ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီးJune 14, 2013 (USA) မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ Super Man ဇာတ်ကားအသစ်ဖြစ်ပါတယ်…Super Man ဆိုတိုင်း ထူးမခြားနား ပုံစံအတိုင်းထူးဆန်းတဲ့ မိုးကောင်းကင်ကနေကျလာတဲ့ လူသားလေးကို ရိုးသားတဲ့ တောသူတောင်သူ လင်မယားကမွေးစားလိုက်တဲ့ ဇတ်လမ်းပါပဲဒါပေမယ့် ထူးခြားနေပါတယ်….Super Man ခေါ် ခါအလ် ရဲ့ မွေးဖွားခြင်းနဲ့ သူ နေထိုင်ရာ ဂြိုလ်ပျက်စီးခြင်းကိုတွဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဂြိလ်ပြန်လည်တည်ထောက်ဖို့ ပင်မ သော့ကိုတော့Super Man ရဲ့ ဖခင် ဂျိုအယ် နဲ့ မိခင် လာရာ က သူ့သား ရဲ့ယဉ်ငယ်ကိုယ်ထဲကို ထည့်သွင်းပေးပြီးတော့ကမ္ဘာဂြိုလ်ဆီသို့ ယဉ်ငယ်လေးနဲ့ ပို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်….အရင်လို မဟုတ်ပဲ ထူးခြားတာကတော့ Super Man ရဲ့ငယ်ဘ၀ မှာ လူတွေနဲ့ အဆင်မပြေနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ကျနော်တို့ ထင်သလို ငယ်စဉ်ကတည်းက Hero လူစွမ်းကောင်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးလူတိုင်းရဲ့ အထူးအဆန်းအဖြစ် ကြည့်ရှုမြင်နေမှုကိုရရှိခဲ့ရတာပါ…ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက် ကျောင်းကား မတော်တဆ ဖြစ်ပြီး ရေနစ်တဲ့အချိန်မှာSuper Man က ရေထဲကနေ ကားကို ကုန်းပေါ်ပြန်တွန်းတင်ခဲ့ပါတယ်..ဒါကို မြင်လိုက်တဲ့ ကျောင်းသား အချို့က ပြန်ပြောပြတော့ မွေးစားဖခင်ကSuper Man ကို ခေါ်ပြီး ဘယ်သူ သေသေ ဒုက္ခရောက်ရောက်အစွမ်းကို ဘယ်တော့မှ ထုတ်မပြပါနဲ့လို့ ကတိတောင်းခဲ့တယ်…ဒီလိုနဲ့ Super Man လဲ တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ဘ၀ ကို ဖြတ်သန်းလာပြီးနောက်လူပျိုပေါက်အရွယ်မှာပဲ မွေးစား အဖေ အမေ နဲ့ အတူ ခရီးထွက်လာရင်းလမ်းတဝက်မှာ လေမုန်တိုင်း ရုတ်တရက်ဝင်လာပါတော့တယ်…လူတွေကို သားအမိသားအဖ သုံးယောက်လိုက်ကူပြီး နေရာရွှေ့ပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ ကားထဲမှာ ခွေးလေး ကျန်နေခဲ့လို့ ဖခင်ဖြစ်သူက သွားကယ်တဲ့အချိန်မှာပဲ ခွေးလေးကို ကယ်လို့ လွှတ်ပေးအပြီး လေမုန်တိုင်းက အဲ့ဒီနေရာကို ဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်အကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာကနေ ဖခင်ကိုကယ်ဖို့ ထွက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Super Man ကို ဖခင်က ခေါင်းတစ်ချက်ခါပြခဲ့တယ် မလာနဲ့ သား မင်းကတိကို မင်းတည်ပါ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တစ်ခု သက်ရောက်နေခဲ့မှာပါ….ဒီလိုနဲ့ ဂြိုလ်ပျက်စီးခဲ့စဉ်က ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တဲ့ သစ္စာဖောက်အကျဉ်းသားတွေလဲ Super Man ရဲ့ အနံ့ကို ခံပြီး ကမ္ဘာမြေပေါ် ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့…. ဇာတ်လမ်းက ပိုကြည့်လို့ကောင်းသွားပါပြီဆက်ပြောချင်ပေမယ့် အညွှန်းက ရှည်နေမှာဆိုးလို့ဘရိတ်ပါပြီ ကျနော် အကြိုက်ဆုံး Super Man ဇတ်ကားတစ်ခုပါလို့ညွှန်းဆိုပါရစေဗျာ…
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက တော့ ၂၀၃၁ ကိုအခြေခံထားပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး အစာငတ်မှုဘေးနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ် အင်ဒိုနီရှား လူငယ်သမ္မတလေးဟာ သူ့လက်ထက်မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အစားအသောက်ခြင်းကြီး တစ်နည်း ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်ကြွေးကြော်ခဲ့ပေမယ့် အာဏာရှိလူထုတစ်သိုက်ကြောင့် နေရာဖယ်ပေးခဲ့ပါတယ် အစာငတ်မွတ်မှု အစိုးရရဲ့နှိပ်စက်မှုတွေကြောင့် ပြည်သူလူထုရဲ့ အယုံအကြည်ယုတ်လျော့လာချိန်မှာတော့ THE REFORM ဆိုတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာ ပြည်သူတွေကို အစားအစာလုံလောက်ပေးမယ်လို့စည်းရုံးမှုကြောင့်အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ် အဲ့အချိန်မှာ စစ်အရာရှိဝန်ထမ်းဟောင်း အယ်လ်တီဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုပြန်ရဖို့ သမ္မတဆီကို အစီအစဉ်တစ်ခုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့် အစီအစဉ်ကိုလက်ခံပေးမယ့်လည်း ဝီစနု ဆိုတဲ့ လူနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့အမိန့်ချခဲ့ပါတယ် ဝီစနု ဟာ အယ်လ်တီအစီအစဉ်ကိုဖျက်ပြီး သမ္မတအဖွဲ့နဲ့အတူ လူအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်အောင် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်အောင် စီစဉ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့အစီအစဉ်ကိုသိသွားတဲ့ အယ်လ်တီ ဟာ The Reform အဖွဲ့နဲ့အတူ ဘယ်လိုတားဆီးမလဲ ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါပြီး Action စစ်ကားကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံးဝကိုလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးမို့လို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
၀၁၉ ထွက် comedy ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Comedy ဆိုပေမယ့် ပေါကားမဟုတ်ပဲ ကြည့်ရှုသူကို
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အလုပ်ကနေ ၂ ပတ်တာ ဆိုင်းငံ့ထားရတဲ့ ကလီယိုတစ်ယောက် ခေါင်းဆေးဖို့ရာ
စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ခရီးထွက်လာခဲ့ပါတယ် …. အဲ့လိုနဲ့ ရပ်ထားတဲ့ သူ့စက်ဘီးကိုဝင်တိုက်တဲ့
အူကြောင်ကြောင် ပေါတောတော လယ်ရီနဲ့ဆုံပါတော့တယ် … ဒီလိုနဲ့ လယ်ရီဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် ကားကြုံ
လိုက်စီးဖြစ်ရာမှ လယ်ရီရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေကို ကလီယိုသိလိုက်ရတဲ့အခါ…
ဘာသာရေးအယူအဆတွေဖောဖောသီသီ သုံးထားပြီးရယ်ရတာမို့ ကြည့်လိုက်ပါဦး။